फोटोहरू: बेप्पू (१) राम्ररी चम्किलो तातो वसन्त रिसोर्ट - Best of Japan
बप्पु माउन्टेन बर्निंग फेस्टिवल = शटरस्टक
बेप्पू! जापानको सबैभन्दा ठूलो तातो वसन्त रिसोर्टमा आनन्द लिनुहोस्! >
कप्पुको पूर्वी भागमा अवस्थित बेप्पू जापानको सबैभन्दा ठूलो तातो वसन्त रिसोर्ट हो। जब तपाईं बप्पू जानुहुन्छ, तपाईं पहिला तातो स्प्रि atहरूमा चकित हुनुहुनेछ जुन यहाँ र त्यहाँ वसन्त हुन्छ। जब तपाईं पहाडबाट बप्पूको शहर दृश्यमा हेर्नुहुन्छ, तपाईं यस पृष्ठमा देख्न सक्नुहुन्छ, स्टीम जताततै उदाउदै छ। तिनीहरू कुनै पनि हालतमा आगो हुदैनन्। रातमा, यी स्टीमहरू रोशनीका साथ सुन्दर देखिन्छन्।
बेप्पू (別 府), ओइटा प्रान्त, जापानको सबैभन्दा ठूलो तातो वसन्त रिसोर्ट हो। यदि तपाईं पूर्ण रूपमा जापानी हट स्प्रि enjoyहरूको मजा लिन चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो यात्रामा बेप्पू थप्न सक्नुहुन्छ। बेप्पूमा धेरै ठूलो मात्रामा तातो पानी छ र त्यहाँ विभिन्न प्रकारका तातो स्प्रि .हरू छन्। ठुलो सार्वजनिक बाहेक ...
कृपया अन्य फोटोहरू हेर्नुहोस्।
"बेप्पूको सर्वश्रेष्ठ" फिर्ता
फोटोहरू: Hakone- टोक्योको नजिक सिफारिश गरिएको तातो वसन्त क्षेत्र
फोटोहरू: जाडो होक्काइडोको निसेको स्की रिसोर्टमा - पाउडर हिउँको आनन्द लिनुहोस्!
फोटोहरू: जिन्जान ओन्सेन - हिउँद परिदृश्यको साथ एक रेट्रो तातो वसन्त शहर
फोटोहरू: हकुबा-जापानको अग्रणी हिमाली रिसोर्ट क्षेत्र
फोटोहरू: युकीमि-बुरो-हिउँदको दृश्यको साथ तातो वसन्तको आनन्द लिनुहोस्